Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo warinaysa in 13 qof oo reer Iowan ah ay u dhinteen | KWIT
Sagaal arday oo dhigta Jaamacadda Dordt ee Sioux Center ayaa tijaabiyey togan waxayna ku sugan yihiin go'doominta xerada ka baxsan.
Sida laga soo xigtay Siouxland News KMEG-FOX 44 jaamacaddu waxay ku martigelisay goobta Imtixaanka Iowa goobta ardayda ee timid horaantii usbuucii hore.
Xoghayaha arimaha dibada ee jamhuuriga Iowa ayaa soo saaray awaamiir ah in gobolada aysan sameyn karin sanduuq dhibic ah si ay u aqbalaan codbixinta hore ee doorashada sanadkaan. Taasi waxay imaaneysaa inkasta oo aan loo tartamin adeegsiga sanduuqyadaas in kabadan seddex meelood meel gobollada Iowa doorashadii hore. Xafiiska Xoghayaha Gobolka Iowa wuxuu dhowaan u sheegay kormeerayaasha degmada inta lagu gudajiray tababarka in sharciga Iowa uusan ogoleynin adeegsiga sanduuqyada dhibicda ee loogu talagalay codbixinta.
Indhaha adduunka oo dhami waxay ku xidhnaan doonaan Gudoomiyaha Gobolka South Dakota Kristi Noem caawa marka ay khudbad ka jeedineyso Shirweynaha Qaranka ee jamhuuriga isla markaana ay kiiskeediisa dib u soo dooran doonto madaxweynaha.
Gudoomiyahii ugu horeeyey waligii ma xidhnayn meheradaha, waligiisna ma uusan xidhnayn maaskaro-xidhnayn wuxuuna soo dhoweeyay laba kulan oo dad weyne xagaagan.
Kadib wax ka badan shan bilood oo ay ka maqnaayeen iskuulka sababta oo ah cudurka loo yaqaan COVID
By Halima Osman • Aug 25, 2020
Kadib wax ka badan shan bilood oo ay ka maqnaayeen iskuulka sababta oo ah cudurka loo yaqaan coronavirus, maanta ardayda ku nool Degmadda Sioux City Community School waxay ku soo noqdeen dugsiga iyagoo wata qaab isku mid ah. Kormeeraha guud ayaa leh haddii heerka cabirka gobolka ee COVID-19 uu sii joogo ama ka hooseeyo heerka hadda ee 9.5 boqolkiiba, ardayda waxay ku noqon doonaan dugsiga Sebtember 8, maalinta ka dambeysa Maalinta Shaqaalaha.
Sagaal qof oo kale oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintey Iowa muddo 24-saac gudahooda ah ku dhawaad 500 oo kiis oo dheeri ah.
Heerka kiisaska togan ee COVID-19 ayaa kusii kordhaya degmada Plymouth County
By Halima Osman • Aug 24, 2020
Heerka kiisaska togan ee COVID-19 ayaa kusii kordhaya degmada Plymouth County. Gobolka Iowa coronavirus websaydhku wuxuu muujinayaa natiijooyin tijaabo ah oo 14-maalmood ah oo gaaraya ku dhawaad 21%.
Wax kasta oo ka badan 15% waxay u oggolaaneysaa degmo dugsiyeed inay codsato waxbarista khaaska ah.
Kororka dartiis, ugu yaraan seddex dugsi oo ku yaal Plymouth County ayaa dib u riixay taariikhihii ay bilaabi lahaayeen iskuulkooda.
Iowa wuxuu soo sheegay in kabadan 800 kiis oo coronavirus ah Jimcihii, taasoo muujineysa fayrasku
By Halima Osman • Aug 21, 2020
Iowa wuxuu soo sheegay in kabadan 800 kiis oo coronavirus ah Jimcihii, taasoo muujineysa fayrasku inuu kusii fidayo iyadoo gobolka uu horay usii wado iyadoo codsanaya in iskuulada maxalliga ah ay dib u bilaabaan xiisadaha shaqsiyeed.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha maalin walba Jimcaha waxay muujisay in ka badan 54,600 kiis oo togan oo ah COVID-19.
Waxaa jiray shan dhimasho oo dheeri ah, taasoo gobolka guud ahaan ka dhigeysa 1,017.
Shirkadda diyaaradaha ee loo yaqaan 'American Airlines' ayaa daadinaya duullimaadyada illaa 15
By Halima Osman • Aug 20, 2020
Shirkadda diyaaradaha ee loo yaqaan 'American Airlines' ayaa daadinaya duullimaadyada illaa 15 magaalo oo Mareykan ah oo ay kujirto magaalada Sioux City bisha Oktoobar, marka shuruud federaal ah oo ay ku adeegayso bulshooyinkaas ayaa dhaca.
Mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa sheegaya in hadda tallaabadu ay tahay ku-meel-gaar oo kaliya laga bilaabo Oktoobar 7-deedii oo safarku dib u bilaaban karo Nofeembar 3-deeda.